Cenital, bhuku ra2012 nemunyori wechiSpanish Emilio Bueso | Zvazvino Zvinyorwa
Cenital, naEmilio Bueso
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Novela
Zenith ibhuku rakagadzirwa neSpanish Emilio Bueso, munyori ane hunyanzvi mukufungidzira fungidziro y akasarudzwa muIgnotus Award 2014. Zita iri rakakonzerwa nezita rekuti "ecovillage", pfungwa yakaunzwa nemunyori maererano nenzvimbo shoma dzakashandurwa kuita refuges kune avo vakapedzisira kupona muvanhu. Ikoko, protagonist - ane kodhi zita rinonzi Destral - anoona zvese zvakasikwa neteresikopu ine simba uye anorondedzera zviitiko zvepasirose nyika ino.
Rakadhindwa muna 2012, zviitiko zvinotsanangurwa mubhuku rino zvaizoitika makore maviri chete gare gare, mukati megore ra2014. Neichi chikonzero, vamwe vanyori vanoongorora vakaita saSergio Sancor, funga Zenith se "inoverengeka yakakosha" nekuda kwekumisidzana kusingagadzirisike kwakaitwa muverengi kuburikidza ne "chiitiko chinotipa mukana wekufungisisa pamusoro pehunhu hwenyika ino uye umo Emilio Bueso anoisa munhu semusoro wouchapupu hwechokwadi rave padyo kupfuura zvatinofunga ”.
2 Hunhu hunhu hweZenith
2.2 Kunanga kutsoropodza kweiyo equivocal system
2.3 Kunyora kuri nyore, asi kunanga uye kwakatwasuka
2.4 Nyudza muverengi
3 Kuronga kuronga
3.1 Mapfupi, ari nyore kuverenga
3.2 Kusava nechokwadi kwese kwese
3.3 Simba mumaoko eakaipisisa
3.4 Vakadzingwa vakaita sevaponesi
3.5 Ruzivo rwakanyanya sechishandiso chekutyisa
Emilio Bueso akaberekerwa muCastellón, Spain, muna 1974. Kudzidziswa kwake kuyunivhesiti kwaive sainjiniya wemakomputa, kuva purofesa weOp Operating Systems paJaume I University yeCastellón. Nekudaro, akatanga kupindira oga mukugadzira nyaya dzinotyisa. Na 2007 aive atoburitsa bhuku rake rekutanga rakazvimirira: Yakavharwa husiku.
Zvino kwakauya kuvhurwa kwe Diastole (2011) uye Zenith (2012), iyo Bueso akavaka mukurumbira wakanaka semunyori yenyaya dzerima uye yakamuwanira iye Celsius Novel Prize, pakati pezvimwe mutsauko. Mumakore akatevera akaburitsa Manheru ano denga richapisa (2013), Aeons Anoshamisa (2014), Zvino edza kurara (2015), Twilight (2017) uye antisolar (2018).
Hunhu hunhu hweZenith
Zvechokwadi, Zenith yakaratidza shanduko yakanaka muhupenyu hwaEmilio Bueso, nekuti zvakamuita piyona muzvinyorwa zvekutanga zvekufungidzira mumutauro wechiSpanish. Saizvozvowo, bhuku iri rinogona kutorwa seimwe yeakatanga mukati meiyo genre inotsanangurwa se "sainzi-yemamiriro ekunze nhoroondo", maitiro ari kuwedzera zvichienderana nezvivakwa zvakaita seBBC kana iyo DW.
Kunanga kutsoropodza kweiyo equivocal system
Kunyangwe nharo yake isingatarise zvakananga pakudziya kwepasi, en Zenith Bueso anoita chirevo chisina kujeka kupusa kwevanhu zvinoreva kusimbirira pamhando yeupfumi yepasirese yepasi rose, inobatsira pakuonekwa kweanogona kuitika mushure mekuuya kwemafuta epamusoro.
Kubudikidza ne protagonist yaro, Destral, munyori anoshora kukanganisika kweruzhinji rwemaindasitiri ezana ramakore XXI, pamwe nekuratidza mhedzisiro yakaipa yenguva yemberi iri pedyo, kuburikidza netambo yekukakavara iyo inotaurira zviitiko zvezvino zvichienderana nezvakaitika zvevamwe vagari vemuecovillage.
Kunyora kuri nyore, asi kunanga uye kwakatwasuka
Nekushandisa yakapusa, yakapfupika chimiro uye yakatakurwa nemifananidzo yakasimba iyo inokurumidza kutora pfungwa, munyori anounza kuratidzika kwenguva dzose muverengi pamamiriro asingadzivisike emunhu seye causative mumiriri wekuparadzwa kwayo. Zvakare zvisingadzivisike ndezvekufungidzira kune vanoramba njodzi dzinogona kuitika mugariro neupfumi dzinorembera pasirese yemari yepasi rose nhasi.
Zenith Iko kuverenga kwakadzikama kwazvo nekuda kwezvikamu zvaro zvipfupi, zvisina kunzvenga, ku kunyangwe hazvo mhepo yakapomerwa kukakavara nehutsinye. Zvisinei, iri bhuku rakaoma, rakaoma kugaya muzvikamu zvinoverengeka, inogara ichisangana nemuverengi uye inomumanikidza kuti aongorore chokwadi chake.
En Zenith zviitiko zvese zvinotaurwa zvine chikonzero chekuve. Izvo zvisingazivikanwe zvinofanirwa kupindurwa nemuverengi paanozvinyudza munyika izere nezviratidzo zvinovhiringidza uye inoyevedza (yakanyatso shandiswa nemunyori pasina kuwedzeredza ino sosi).
Mapfupi, ari nyore kuverenga
Chimiro chechimwe chitsauko, chipfupi uye chiri nyore kuverenga, chinozadziswa zvakakwana nenyaya isiri-yekufungidzira izvo zvinokonzera chirauro chakasimba kwazvo. Icho chinenge chimerical kusava nehanya nemibvunzo yakabvunzwa zvakanyanya nemunyori mubhuku iri. Iko kutyisidzira kwakaiswa mukati Zenith hazvioneke here kana kuti hupenzi hwevanhu hunoramba huripo?
Kusava nechokwadi kwese kwese
Kusava nechokwadi kunogara kuripo. Kutanga, nekuti halo yekuoneka kunokwanisika haigone kufuratira yakasanganiswa nemifananidzo inokatyamadza yekudya nyama nekuparadza kwakanyanya. Chechipiri, zvinokwezva kuhana yemuverengi nekuratidzira pamwe nekutsigira kunogonesa kusagadzikana kwehupfumi hwenyika hwakavakirwa pamafuta epasi, mukati mechiitiko chinoita senge chisina kuwedzeredza.
Quote naEmilio Bueso.
Panzvimbo yechitatu, tariro yekuzvarwa patsva kwevanhu inopesana nehunhu chaihwo hwemunhu. Uye izvi hazvishamise, kuzvimirira uye kuda kwevanhu kwakavaka nzira isingakundike yekuzviparadza. Chekupedzisira, munyori nenzira inoratidzira anoratidza kupesana kwemunhu zvine chekuita nemitemo yezvakasikwa, uko - dzidziso - yakasimba kukunda uye vanokwanisa kupfuudza magene avo kuchizvarwa chinotevera.
Simba mumaoko eakaipisisa
Zvisinei, munhoroondo kuvandudzwa kwebudiriro kwakaguma nekuvapo kwevarume vasina simba (panyama). Izvi zvakakwanisa kujekesa goko resimba kutonga vamwe nekushandura nharaunda yavo zvinoenderana nekureruka kwavo. Nechikonzero ichi, munhu haakwanise kuvapo achienderana nenzvimbo yake ... aiwa, imhando iyo inotakura kutuka kwekushandura zvese zvainobata kuita seseji nekuda kwenzara yayo isinga guti yesimba.
Vakadzingwa vakaita sevaponesi
Uyewo, Emilio Bueso anomutsa nenzira yehunyanzvi zvikuru vanhu avo vanokwanisa kuvaka dzimba dzekugara inozivikanwa seecovillages. Naizvozvo, iri basa rinokudzwa rinobata vakasarudzika nenzanga, zvisizvo, vasinganzwisiswe, zvisingawanzo. Asi hazvisi zvese zvine mutsindo mukati meaya masuo. Kana muchimiro iri Edheni kune vakapona veapocalypse, nenzira imwecheteyo ijeri. Izvi hazvishamise, hunhu hunogara mavari.
Ruzivo rwakanyanya sechishandiso chekutyisa
Ndokunge, hapana munhu akasununguka zvachose mukati kana kunze kweparadhiso iyi. Kutya ndiko kwakajairika kufananidza sarudzo dzese. Kune rimwe divi, mutauro wakananga unoshandiswa naBueso unokatyamadza muverengi. Izvo zvakataurwa zvinorwadzisa, asi pasina kushandisa zvisingakoshi kana kure-kutorwa mitsara.
Chiitiko chega chega chinoitika chine mavambo, chikonzero chakanangana nepfungwa dzekunze, hapana magumo akasununguka kana zviitiko zvisina kujairika. Iyo rondedzero yakanyatsojeka kubva kune yekutanga kusvika kune yekupedzisira tsamba, nekudaro, inoda kuti izere kutarisisa kweanogamuchira. Zvirokwazvo, Zenith Iyo ine zvese zvakakosha zvinhu zvekuvaka kunovaka uye kunonakidza kuverenga, izvo zvinoita kuti ive yakakurudzirwa kwazvo novel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Cenital, naEmilio Bueso
Horacio. Kuyeuka yekare yeRoma. 5 yenhetembo dzake
Cinderella uye yake chaiyo mavambo